‘फरार’ सिलवालको प्रतिप्रश्न : हाकिमसँगै खाना खाएँ, कसरी भागें म ? — Newskoseli
‘फरार’ सिलवालको प्रतिप्रश्न : हाकिमसँगै खाना खाएँ, कसरी भागें म ?
प्रहरीको ‘फरार सूची’ मा रहेका पूर्वडीआर्इजी एवं ललितपुर– १ मा नेकपा (एमाले) बाट विजयी सांसद नवराज सिलवालले आफू काठमाडौंमै रहेको संकेत दिएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा किर्ते कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेस गरेको अभियोगमा अनुसन्धान भन्दै प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका छन् सिलवाल ।
आइतबारको नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा सिलवालले माघ ९ गते एक पूर्वप्रहरी अधिकारीसँगै बसेर आफूले खाना खाएको दावी गरेका छन् । प्रहरीले भने उनी विदेश रहेको भन्दै ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको छ ।